Oke ihu igwe ihe ijuanya nke ga-eju gị anya | Netwọk Mgbasa Ozi
Na mbara ụwa anyị enwere ihe omume ihu igwe dị oke egwu nke gbadara n'akụkọ ihe mere eme. Oké mmiri ozuzo, oké ifufe, ifufe, tsunamis, wdg. Nature adighi-akwụsị itunanya anyi ma gosi anyi ike na ime ihe ike o nwere ike inwe. Ihe onyonyo nke mmiri ozuzo na ọdachi ndị na-emere onwe anyị bụ ihe anyị ga-ahụ taa na post a.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe ndị kasị njọ ihe ndị mere na mbara ala, na-agụ 🙂
1 Oke ihe omume ihu igwe
2 Oyi dara na Levante na Spain
3 Tornado Alley na United States
4 Oke udu mmiri n’India
5 Ebe nkpuchi n'ime uwa, Atacama desert
6 Oké mmiri ozuzo Ice na Oké Osimiri Ukwu nke United States
7 Ọtụtụ ajọ ifufe na ajọ ifufe
8 Ifufe Katabatic na oyi na-atụ
9 Oke ikuku na Sahara na United States
Oke ihe omume ihu igwe
Oke ihe omume ihu igwe bụ ndị gafere oke ike gbasara nkịtị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a na-ewere oke ifufe nwere oke oke dị ka ihe egwu ihu igwe. Mgbe nke a mere, n'ozuzu, ọdachi na-esite na mmetụta ha nwere na ndị dị ndụ. Ọzọkwa, ha na-emetụta oke okike na ngwongwo ihe onwunwe.
Na-esote anyị ga-ahụ ndepụta nke ihe kachasị emetụta ihu igwe emeela na mbara ala.
Oyi dara na Levante na Spain
Ọnọdụ a mere mgbe oke oyi jikọtara ya na ifufe ihu igwe nke jupụtara na mmiri na Mediterranean. Mediterenian dị ọkụ n'oge mgbụsị akwụkwọ, mgbe ọ gbakọtara okpomọkụ niile site na nnukwu okpomọkụ. Ya mere, o mere otu n’ime ihe omume kacha egbu egbu n’ala anyị.
E nwere nnukwu mmiri ozuzo ụdị a, na-ebute idei mmiri n'ọtụtụ ebe. Mmiri mmiri ozuzo kwuru nke ọma ma dị ogologo oge.
Tornado Alley na United States
United States bụ mpaghara ala ebe oke ikuku na-eme ugboro ugboro. Ihe omume a nwere ike ibibi ihe niile dị n'ụzọ ha, mana n'emebighị nnukwu ihe owuwu ndị dị ya nso. N'adịghị ka ajọ ifufe nke na-ebibi ihe niile, okirikiri nke oke ifufe dị obere.
Maka ndị dinta oké ifufe ahụ bụ ndị raara onwe ha nye ịmụ ha n'ụzọ miri emi, oké ifufe bụ Alley bụ otu n'ime ihe ndị kachasị chọọ. O mere na mpaghara Texas, Oklahoma, Arkansas na mpaghara ndị ọzọ Midwest. A tonado ọ na-enwekarị ọnụọgụ ọnwụ 2%. Agbanyeghị, kwa afọ enwere ọtụtụ ọnwụ na-eri ụgwọ mmebi ọ kpatara na mbibi ya.
Oke udu mmiri n’India
India bu ebe otutu udu mmiri na udu mmiri. Na ngwụcha ọnwa Mee, ikuku a na-akpọ ugboelu na-eme na elu ikuku nke ikuku, si na ọdịda anyanwụ wee bụrụ onye na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ na mbara ala Ganges n'oge oge oyi. Ugbu a dị na njedebe May wee gawa n'ebe ndịda na Bengal wee laghachi ọzọ. Nke a na - akpata oke mmiri ozuzo na Himalayas wee banye na West, gbasaa na mba ahụ.
Ihe omume a nwere ike ịbụ nkewa dị ka ọdịda oyi, mana Mpaghara ọ na-emetụta buru ibu karịa. Mmiri oyi na-emetụtakarị ebe ndị akọwapụtara nke ọma, ebe ọ bụ na mmiri ozuzo na-adịgide, ha na-achịkwa butere oke ide mmiri yana nsonaazụ nke ngwongwo.
Ebe nkpuchi n'ime uwa, Atacama desert
Na ikpo okwu nke ọzara kachasị mma na mbara ala, ị ga-ahụ Ọzara Atacama. A maara na n'ọzara oke mmiri na-adị ntakịrị na okpomọkụ na-adị elu n'oge ehihie ma na-adịkarị ala n'abalị.
Otú ọ dị, naanị 0,1 mm nke mmiri ozuzo kwa afọ, bụ ọzara Atacama. Ejiri ihu igwe nke ọzara a site na radieshon nke anyanwụ siri ike nke edobere ya na nsị ọhụhụ nke infrared radieshon si n'elu. N'ihi ihe ndị a, enwere nnukwu oghere n'etiti oge ehihie na abalị.
N'ihi eziokwu ahụ na mmiri ozuzo pere mpe, na mpaghara a, mmepe nke ahịhịa agaghị ekwe omume.
Oké mmiri ozuzo Ice na Oké Osimiri Ukwu nke United States
Ifufe siri ike nke na-abịa na oke oyi site na ugwu na-ejupụta na iru mmiri ka Osimiri Ukwu ahụ gafere. Mgbe ha jikọtara ụsọ mmiri nke mbụ na ndịda, ha na-akpata otu n'ime ihe egwu kachasị dị egwu na mbara ala, oke ikuku mmiri.
Chegodi ikuku juputara na iru mmiri, ya na okpomoku di ala nke na umu mmiri mmiri achoro na ikuku di oyi. Mgbe oke ikuku mmiri a mere, akụrụngwa na-emebi nke ọma, ọkachasị cabling network eletriki. Ice na-etinye ihe ndozi na oge ọ bụla na-achịkọta nnukwu ibu. Akara ike na-enyefe n'okpuru ibu ma enwere ike ike ọkụ n'ọtụtụ ebe.
Ọtụtụ ajọ ifufe na ajọ ifufe
Ajọ Ifufe na ajọ ifufe bụ oke ihe okike na ọbụghị n’ihi ike ya, kama ọ bụ maka oke ya na ike ibibi ihe. Ajọ ifufe na ajọ ifufe ama ama bụ ndị mere na Gulf of Mexico, Cuba, Haiti, Dominican Republic, Florida, Mexico, Central America, United States, Oke Osimiri Caribbean na Asia (Taiwan, Japan na China).
A hurricane nwere ike ibu ọtụtụ tonado, ya mere ike ibibi ya bụ obi ọjọọ. Akụkụ kachasị dị egwu nke ajọ ifufe bụ oke ifufe. Nke ahụ bụ, otu nnukwu kọlụm nke mmiri mmiri nke ikuku na-ebugharị ma nwee ike ide mmiri na ụsọ oké osimiri mgbe ajọ ifufe ahụ batara na kọntinent ahụ.
Ọ bụrụ na oké ifufe ahụ rute ala ma ebili mmiri ahụ pere mpe, mmiri ahụ nwere ike ịrị elu ruo mita isii n'akụkụ ụsọ oké osimiri, na-ebute ebili mmiri ruru mita 18 n ’elu. Ya mere, a na-ahụta oke ifufe kachasị njọ na-emetụta ihe omume ihu igwe.
Ifufe Katabatic na oyi na-atụ
Ebe kachasị oyi na ndekọ ụwa bụ Vostok. Na ebe a enwere ogo okpomọkụ nke -60 ogo ọ ruru debanye aha -89,3 degrees. Ya mere, ndụ enweghị ike ịmalite na mpaghara a. Ifufe Katabatic bụ ihe na - eme na ihu igwe Antarctic. Ihe ndị a bụ ikuku sitere na ikuku nke ikuku ikuku mgbe ha batara na ice. Ifufe ahụ na ala dị larịị ma nwee ike iru ọsọ ọsọ ruo 150km / h ma dịgide ruo ọtụtụ ụbọchị.
Oke ikuku na Sahara na United States
Oke ikuku ha na-enwe ike belata visibiliti ọbụlagodi igirigi. Nke a na-eme njem na njem agaghị ekwe omume. Uzuzu dị na oke ikuku na-aga ọtụtụ puku kilomita wee metụta uto nke plankton na ọdịda anyanwụ Atlantic Ocean, ebe ọ bụ isi iyi nke obere mineral maka osisi.
Echere m na ihe ijuanya dị ịtụnanya na-egosi anyị juru gị anya. Ya mere, ọ dị mkpa ịmara nke ọma ebe anyị na-aga, ịmara etu anyị ga-esi mee ihu n'ụdị ụdị ihe egwu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oke ihu igwe ihe ijuanya nke ga-eju gị anya
Ezigbo, ezigbo post, enwere m mmasị na ihe ịtụnanya, ha dị ịtụnanya. Akụkụ akụkụ bụ nsogbu ya na nsonazụ ya. Ọmụmaatụ dịka nsị na-apụ apụ ọtụtụ oge mana nsị nke ọ na-ewe nwere ike igbu ọtụtụ puku mmadụ.
Na m website m nwere isiokwu iji na ndị a phenomena